Waa Maxay Dambiyada Deegaanka ‘eco-crime’? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 17, 2020
Qashinka iyo suntan badaha Soomaaliya lagu soo shubo xal ma loo helay?
Dembiyada deegaanka waa ku xadgudubka shuruucda deegaanka waxaana loo dejiyay in lagu ilaaliyo deegaanka. Marka si guud loo qeexo, dambigu waxay isugu jiraan dhammaan falalka sharci darrada ah ee sida tooska ah u keena waxyeelada deegaanka. Dembiyada noocan oo kale ah waxaa sidoo kale loo yaqaannaa ‘dambi ka dhan ah deegaanka.’
Dembiga deegaanku wuxuu daboolayaa isku-darka howlaha ku xadgudbaya sharciga deegaanka u horseedda waxyeello weyn ama khatar ku ah deegaanka, caafimaadka aadanaha, ama labadaba.
Dembiyada deegaanka waa fal sharci darro ah oo si toos ah wax u yeelaya deegaanka. Hay’adaha caalamiga ah sida G8, Interpol, Midowga Yurub, Barnaamijka Degaanka ee Qaramada Midoobay iyo Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee dembiyada iyo Machadka Daraasaadka Caddaaladda ayaa aqoonsaday dambiyada deegaanka waana sharci dunida laga isticmaalo.
Waa sunta Soomaaliya loo soo dhoofiyo, madamaa aysan jirin cid yac dhahayso!
Dembiyada Deegaanka waxay dabooshaa ficilada jebiya sharciga deegaanka u horseedda waxyeello waa weyn ama khatar ku ah deegaanka iyo caafimaadka aadanaha.
Meelaha ugu caansan dambiyada deegaanka waa ‘sharci darida ama daadinta walxaha hawada, biyaha ama ciidda, ganacsiga sharci darrada ah ee duurjoogta, ganacsiga sharci darrada ah ee waxyaabaha sunta ka soo saara iyo kuwa sharci darrada ah ee dhoofinta ama daadinta qashinka.
Dhibaatada dambiyada deegaanka ayaa sannado badan loogu wada hadlay fagaarayaasha caalamiga ah iyo kuwa Afrika. Midowga Afrika wuxuu qaatay soo-jeedin tilmaam ujeedo leh oo lagu hubinayo illaalinta deegaanka iyada oo loo marayo sharciga dambiyada.
Waxaa nasiib-xumo ah in badaha Soomaaliyeed ay noqdeen goobaha sunta iyo qashinka la iskeega daadiyo, dhammaan arrimahaasi waxaa wax ka qaban karo waa dowladda ay ummada Soomaaliyeed fiirsanayso iyo dhaqdhaqaaq bulsho.
Xaqiiqdu waxay tahay in heerka baaxadda ee dambiyada deegaanka micnaheedu yahay inaanan la xallin karin sida in deegaanada Soomaaliya laga xaalufiyo dhirta. Laakiin maalin kasta oo aan ficil la samayn waa maalin ay nooleyaasheenna dhibaato ku soo gaareyso – iyo waliba dadka iyagu ku tiirsan noloshooda. Sida kaliya oo loogu hortagi karo ficiladaan waa inaan la imanaa ficilo wada jir ah.
Tags: Waa Maxay Dambiyada Deegaanka 'eco-crime'?
Next post Dhaqaalaha Somaliland Miyuu Kobcay 10-kii Sano ee Aynu Soo Dhaafnay Mise Hoos Buu u Dhacay?
Previous post Waa Maxay Nasiibku? Waa weyddiin iyo fal-celinteedi.!